Cabdi Bile Cabdi – The official Somali Historical
Abdi Bile (Somali: عبدالله بله عبدالله
Cabdi Bile Cabdi,wuxuu dhashtay 28 December 1962
Cabdi waxa uu caan ku ahaa orodada qeebta Sportiga dunida waa mid nuuciisa kaga jiray qeebta dhexe haysta diiwaanada kala duwan ee qaranka Soomaaliya oo ciyaaraha fudud nidaamo kala duwan.
Sanadkii 1987 ayuu noqday horyaalka adduunka ee 1500 oo mitir, Soomaali ugu horeysay ee ay sidaa u sameeyaan. 1996 ayuu wakiil Soomaaliya ee 1996 Summer Olympics for the 1500 mitir Nolosha Hore.
Waxa uu ku dha shay Laas Caanood, Soomaaliya
Abdi Bile uu ku koray bulsho meesha ugu badan ee ay dadku ahaayeen reer guuraaga ah. Wuxuu ku dhameystay dugsiga sare isaga oo dugsi ku yaal Ceerigaabo. Abdi Bile bilaabay orodka markii uu marka hore u maqlay Orodyahanka Soomaaliyeed Jamac Karacin kuwaas oo helay deeq waxbarasho galay Maraykanka. Tani waxa ay ahayd markii orodka noqday hiwaayadiisa.
Marka Abdi ahaa orgi kasta oo yar ayuu aad xiisaynayay kubada cagta ah ama soccer.
Abdi Bile ahaa mid nuuciisa aanay weyn laakiin aan nuuciisa oo kaliya in qoyskiisa. Waxaa jiray dad badan oo walaalaha isaga oo kale kuwaas oo xiisaynayn ordaya wakhtigaas
Bile ku guuleystay 1500 m World Championship 1987
orodka kama dambaysta ah 800 m jinsiyadda ee 1:46.00, ugu dhakhsaha badan ee ugu dambeeya 800 m kasta oo jinsiyadda 1,500 mitir ee taariikhda. Wuxuu ahaa laba-goor Olympic Games (1984 iyo 1996) iyo woqooyigu oo ka dhacay tartan orodo 1980. Bile oo ahaa ugu horeeyay ee kaalinta adduunka ugu fog intaasoo mile 1989. Wuxuu ahaa horyaalka koobka adduunka ee 1500 m ee 1989 iyo laba-goorkale dunida Grand Prix horyaalka finalka
Bile ka qalin jabiyay Jaamacada George Mason ah ee maamulka marketing. At George Mason, Bile oo ahaa kabtanka kooxda iyo NCAA Division iyo horyaal 1,500 mitir laba-goor, badiyay inuu title ugu horeysay ee 1985 (3:41.20) iyo labaad ee 1987 (3:35.79). Waxa uu sidoo kale ku guuleystay horyaal badan oo shirka oo lagu qabtay inter-Collegiate 1500 diiwaanka in ka badan toban sano.
Waxa macalin u ahaa John Cook, tababaraha hore ee 2008 Olympic biladda maarta ah 10,000 mitir Shalane Flanagan.
wuxuu u seegay 1991 World Championships iyo sidoo kale 1988-kii iyo 1992-kii Olympics sababtoo ah dhibaatooyin sida.
1996 ayuu lixaadka u dhammaatay ee kama dambaysta ah Olympic 1500.
Bile ayaa si ballaaran u safray iyo waxa uu la waxyooday dhalinyaro badan oo ka caawiyey hay’adaha bani’aadamnimada dhowr.
Waxaa xaaskiisa eey u dhashay, wiil oo la yiraahdo Ahmed oo lagu magacaabay, willkaasoo u dhashay taariiqda goorta eey eheyd 1993. Sida inta ka dambeeyayna dugsiga sare, Ahmed oo badiyay gobolka title Virginia ee iskutallaabta dalka, horyaalka 1000m iyo 1600m title lala isagoo laba-time New Balance All-American ee 800m ee.
Next: Juquraafiga dhulka iyo Taariikhdiisa